SKU: 146-48-5 Sokajy: Sex Hormone
Sary vongana Yohimbine roah (146-48-5)
Yohimbe dia fanampin-tsakafo ahitra izay ampiasaina hitsaboana ffunction ary hampiroborobo ny fatiantoka. Ny fomba fiasan'ny yohimbe amin'ny vatana dia amin'ny alàlan'ny fanakanana ny alfa-2 receptors adrenergic. Ny vovony Yohimbine vovony dia manakana ny adrenoceptor alpha-1 sy alpha-2, mampitombo ny adrenalinina sy dopamine ary mampihena ny haavon'ny serotonin. Ny fanakanana ireo receptor ireo dia mampitombo ny tosidra, mamoaka insuline ary mampihena ny haavon'ny siramamy.Raw Yohimbine powder blocks blocks serotonin-1B, -1D, -2A, ary -2B (5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2, 5-HT2, 2-HT3 HT2B) mpandray, ary dopamine-3 sy dopamine-XNUMX (DXNUMX ary DXNUMX).
Rohamena Yohimbine (146-48-5) Specifications
Product Name Rano Yohimbine roah
Anarana simika D-Raw Yohimbine vovoka, ALPHA-YOHIMBIN, RAUBASIN
molekiolan'ny Formula C21H26N2O3
molekiolan'ny Wvalo 354.45
mitsonika Point 231-233 ° C (lit.)
vayma- Point 487.66 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Famonoana ny antsasaky ny fiainana dia manodidina ny 36 minitra.
Solubility Azo havaozina ao anaty rano (10 mg / ml)
Application Wiki puzzle.svg
Rohamena Yohimbine (146-48-5) Description
Yohimbe dia hazo hita any Afrika Afovoany izay manana ny anaran'ny siansa Pausinystalia johimbe, ary fantatra manodidina an'izao tontolo izao izy noho ny singa matanjaka iray antsoina hoe yehimbine vovoka hita ao anaty sombin'ity hazo ity. Nankatoavin'ny fikambanan'ny zava-mahadomelina iraisam-pirenena izy ireo olana ara-pahasalamana. Manana fiantraikany mahery vaika amin'ny rafitra misy anay izy, ary toy ny fanafody matavy be dia be, diahimbe avy amin'ny fampiasana nentim-paharazana. Ny hodi-kazo dia ampiasaina amin'ny ankapobeny, ary ankoatra ny zavatra hafa.
Ny ampahany mampalahelo dia ny fambolena ny hazo fihinam-bary noho ny sokatra sarobidy sy ny vokatra tsara dia nahatonga ny fihenan-tsahala mety ho azo avy amin'ny hazo, indrindra any amin'ny firenena afrikana any Afrika Andrefana. Aoka ho azo antoka foana ny hahazoana ny hazo fihinam-bary, na zavatra mitaky ny fihinan'ny poofa hohimbinina, avy amin'ny mpitsabo voaaro na ny sakafo ara-tsakafo. Noho ny fahasamihafana misy eo amin'ny toe-javatra misy anao dia tadiavinao antoka fa miatrika doka mety ianao, satria mety hampidi-doza ny vovobony hohimbine.
Yohimbine vovoka (146-48-5) Mechanism of Action
Yohimbine vaky kitapo alpha-1 sy alpha-2 adrenoceptors, mitombo ny adrenalinina sy dopamine ary mihena ny serotonine. Ny fanakanana ireo receptors ireo koa dia mampitombo ny tsindrona tosika, mamoaka insuline ary mihena ny siramamy ao amin'ny rà.
Ny Yohimbine dia manakana serotonin-1B, -1D, -2A, ary -2B (5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2A, ary 5-HT2B) ary ny dopamine-2 sy dopamine-3 (D2 sy D3).
soa ny Yohimbine vovoka (146-48-5)
1) Ny fitsaboana Erectile Dysfunction
2) Mampiroborobo ny fatotra sy ny fahaverezan'ny vokatra
3) Manimba ny tahotra sy ny fanahiana ara-tsosialy
4) dia manampy amin'ny fitondrana ny karazana 2 Diabetes
5) Hanatsara ny fahatsiarovana
6) afaka manatsara ny fahaizan'ny kognita
7) Manala ny fitaratra ra
8) Afaka manampy amin'ny sendikan'ny aretin-kibo
9) Miaro ny renisoratra
10) Afaka manampy ny Aretin'ny Arthritis
11) Mety hampihena ny fangirifiriana
12) Afaka manampy ny fitsaboana Clonidine Overdose
Yohimbine (146-48-5) dosage Recommended
Ho an'ny fatiantoka matavy, hatramin'ny 20 mg mizara amin'ny dosie 2 isan'andro dia hita fa mahomby.
Ny soso-kevitra hanampiana azyhimbine alohan'ny sakafo na ny sakafo dia afaka miteraka ny fiantohana ny insuline mba hampitombo be.
Ny fandinihana mijery fatra dia nampiasaina toy ny 42 mg / andro.
Ny vokatry ny Yohimbine (146-48-5)
Yohimbine: Ny zava-drehetra tokony ho fantatra momba ny Afrodisia voajanahary ampiasaina amin'ny fitondran-tena mahazatra, mampitombo ny Libido, ary hampitombo ny firaisana ara-nofo ary hahatonga anao ho ilay lehilahy notadiavinao hatrizay, Hilary Tony, CreateSpace Independent Publishing Platform, pejy 1-34.
Yohimbine, Jesse Russell, Ronald Cohn, Boky Fikarohana, 2012, pejy 1-88.
Encyclopedia of Dietary Supplement, natontan'i Paul M. Coates, M. Coates Paul, Marc Blackman, Marc R. Blackman, Gordon M. Cragg, Mark Levine, Jeffrey D. White, Joel Moss, Mark A. Levine, pejy 567-593.